ရန်ကုန်မှာလည်ရမဲ့ ထူးထူးခြားခြား နေရာများ - LODGGY
ရန်ကုန်မှာ ဘာလည်စရာနေရာတွေရှိမလဲလို့ တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မျက်စိထဲမှာအရင်မြင်တာက ဘုရားနဲ့ ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အဦးတွေပါ။ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်းနေရာတွေလိုက်ပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကိုတိုင် Urbex (Ubran Exploring) စိတ်ဝင်စားသူဆိုရင် ဒီ List ကဲနေရာတွေကတော့ ရောက်သင့်တဲ့နေရာတွေပါပဲ။
You might have already noticed that I love abandoned places 😅⁣ ⁣ I don't know what it is that draws my attention, but I love wandering those abandoned places and come up with stories that happend in there😅⁣ ⁣ One of my favorite was the abandoned amusement park in Myanmar – quite dangerous because of angry street dogs but so worth visiting 🤩⁣ ⁣ ➡️ Do you like visiting abandoned places?⁣ ⁣⁣⁣ 🇲🇲 𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐌𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫 𝐏𝐢𝐜𝐬: #wanderdreads_myanmar⁣ ______⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Follow me @wanderdreads for more dreadlock & travel pics🌏💗⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🎬 Youtube.com/wanderdreads⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🔎 Facebook.com/wanderdreads⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣______⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ @travelbloggersclub @travelbloggersfollowloop @travelbloggeres @myanmar.only @instamyanmar @myanmartourism @itsabandoned @abandoned.earth @abandonedafterdark⁣ #travelblogger #travelblog #travelphotography #travelinspiration #myanmar🇲🇲 #myanmartourism #travelmyanmar #dreadlocks #lifestyleblogger #amusementpark #backpacking #backpacker #travelgirls #gltlove #girlslovetravel #traveler #travelvlogger #yangon #bangkok #digitalnomadlife #digitalnomad #abandonedplaces #abandonedphotography #myanmar #abandonedamusementpark
A post shared by Travel Blogger | Mona Leo (@wanderdreads) on Mar 28, 2020 at 4:31am PDT
ငယ်ငယ်ကလေးကျောင်းသားဘဝတုန်းကဆို ကျောင်းပိတ်တိုင်းသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာ။ မြန်မာပြည် ရဲ့ ပထမဆုံး ပစ္စည်းစုံတဲ့ Amusement Park လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပိတ်သွားမှန်းမသိပဲ သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ ပျက်စီးယိုယွန်းနေပါပြီ။ အခုတော့ ဒီ Amusement Park က ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ကမ္ဘာပျက်သွားတဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးတော့ Urbex(ubran exploration) စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ အသွားများတဲ့နေရာပါ။
❤️💜💙💚💛🧡❤️💜 After decades of rubbish dump and six months of multiple efforts from volunteers, artists and residents themselves, the YGNWALLS collective has transformed this “trash alley” back to what it used to be,acultural space where cinema and art can flourish again. In this new Open Air Art gallery, children have nowasafe space to play and get inspired and there are dance activities proposed every Sunday morning! Tks @aia_myanmar_official for your support ❤️ #ygnwalls#yangon #streetart #myanmar #yangonstreetart #cleanstreets #art #makeitpossible #act #instastreetart #joy #cleanstreets #nomoreplastic #volunteer #yangonlife #colors #colorful #Rangoon #colorfulstreets #yangonoftheday
A post shared by YGN WALLS – YANGON MYANMAR (@ygnwalls) on Feb 28, 2020 at 6:18am PST
DohEain (ဒို့အိမ်) Foundation မကထပြုပြီး အမှိုက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ထဲ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကို ပြန်ရှင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က အားလုံးအသုံးပြုလို့ရမဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားအဖြစ် ပြန်လည် အသက်ဝင်အောင် ပြင်စင်ထားတဲ့လမ်းတွေပါ။ သန့်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ Volunteer အကူအညီတွေအများကြီိးလည်းပါတယ်။ နံရံပန်းချီတွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးဖန်တီးထားပါတယ်။ YGNWALL လမ်းကြား ၈ခု ရှိနေပါပြီ။ တခုနဲ့တခုကလဲ Theme မတူဘူးနော်။
သဘာဝ သမိုင်းပြတိုက် /ဆင် ပြတိုက်
ကျွန်တော်လို ရန်ကုန်မှာကြီးလာတဲ့သူတောင် ဒီ ပြတိုက်ရှိမှန်း ၂၀၁၅ ကမှသိတာပါ။
တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့တစိတ်တဒေဖြစ်ပြီး ပန်းဆိုးတန်းနဲ့ ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်း​ဒေါင့်မှာရှိပါတယ်။ သစ်ကုလားအုတ်၊ ကျား စတာတဲ့ ရုပ်လုံးသွင်းကောင်တွေရှိသလို တရုတ်ပြည်က လှူဒါန်းထားတဲ့ ပန်ဒါဝက်ဝံ လုပ်လုံးသွင်းကောင်လဲရှိတယ်။
မတ်လ ၂၀၁၉ မှာ မြေညီထပ်ကို ဆင်ပြတိုက် အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြခန်းမှာ ဆင်အကောင်လိုက် အရိုးဆု၊ ဓာတ်ပုံ၊ video တွေကို ပြသာထားပါတယ်။
This beautiful lay unfinished and untouched by society. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Thabinnyu Pahtoetaw Gyi,areplica of Thabinnyu from Bagan. Try to spot me here too 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #myanmar #Igersmyanmar #mymyanmar #seemyanmar #yangonoftheday #instamyanmar #vscomyanmar #yangon #myanmar #visit_myanmar_now #fromwhereidrone #amzdronepic #dji #djiglobal #mavicair #djisurreal #whereidrone #backpackersintheworld
A post shared by Aung Toe (Travelin Bamar) (@a.toe) on Nov 7, 2018 at 1:35am PST
ပုဂံက သမ္ဗညုပုံဘုရားနဲ့ ပုံစံတူတည်ဆောက်ထားတဲ့ ပုထိုးတော်ပါ။ ဒီပုထိုးတော်ကြီးကို တည်ဆောက်နေတာ ၁၀စုနှစ်နီးပါးရှိနေပေမဲ့ မပြီးစီးသေးပါဘူး။ မြေညီထပ်မှာ hall ခန်း နဲ့အလည်မှာ ဘုရားဆင်းတုတည်ထားသလို၊ ပုဂံဘုရားတွေလို နံရံတွေမှာ အုတ်ကွက်ဘုရားဆင်းတုတွေလဲလုပ်ထားပါတယ်။ အပေါ်ထပ်တက်မယ်ဆိုရင် ခေါင်မိုးတတခုလုံး ကြေးပြားကပ်ထားပြီး ၂ ထပ်တိုက် အမြင့်ရှိ ပုလ္လင်ပေါ်မှာ ဘုရားတဆူတည်ထားပါတယ်။ အပေါ်ကကြည့်လိုက်ရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရပါမယ်။
Beeindruckend und wunderschön: Die vom Zyklon Nargis(2007) zerstörte Nagar Glass Factory im Norden Yangons.Ein Wald voller versteckter Fundstücke, gebrochener Erfolge und ja Schmetterlinge und Schlangen waren auch dabei. #lebenamlimit 🐍 (Feat. @zarah.poesy ‘s & @vondonnerbalk ‘s neues Albumcover )
A post shared by Vroni. (@silber_g) on Jan 11, 2020 at 6:46am PST
အင်းစိန်လမ်းမအနီး က နဂါးဖန်ချက်စက်ရုံပါ။ 1948 က စတင်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပထမဆုံး ဖန်ချက်စက်ရုံတစ်ခု လဲဖြစ်တယ်။၁၉၄၈ တည်းက မရပ်မနား မငြိမ်းသတ်ပဲရှိခဲ့တဲ့ မီးလင်းဖိုက 2008 ခုနှစ်ကနာဂစ်ရဲ့ကြောင့် မီးလင်းဖိုလဲပျက်စီးခဲ့သလို စက်ရုံကြီး လည်း ပြိုကျသွားပါတယ်။
မြေပြင်တခုလုံး ဝိုင်ခွက်၊ ရေခယား၊ ဖန်အရုပ်တွေ၊ ပန်းအိုး စတဲ့ဖန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ မြေမှာ ပျံ့နှံ့နေတာတွေ့ရပါမယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝယ်လို့ရတယ်နော်။ ကျွန်တော်တောင် whisky ခွက် အိမ်အတွက် ဝယ်ထားပါသေးတယ်။ စျေးမှရတဲ့ ဖန်ခွက်လိုမဟုတ် သေချာဖန်နဲ့လုပ်ထားတော့ ခိုင်မာမှုရှိတယ်။
4/5 “Stimulant drugs – stairway to insanity” #drugwar #myanmar #drugs #yangon #drugeliminationmuseum #goldentriangle #narcos #antidrugs #antidrugscampaign
A post shared by Jennifer Shehane (@jennifer_shehane) on Apr 27, 2019 at 10:53am PDT
စစ်အစိုးရလက်ထက် June 2001 ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ပြတိုက်ပါ။ ဒီ ပြတိုက်ကိုလည်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်အနှံ့ရော၊ အိမ်နီးချင်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ပျံ့နေတဲ့ မူးရစ်ဆေးဝါးတွေအကြောင်းသိရမယ်။ မူးရစ်ဆေးသုံးလို့ ဘဝတွေ ဘယ်လိုအမှောင်ကျသွားမယ်၊ စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ မူးရစ်ဆေးဝါးဘယ်လိုတိုက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ပန်းချီ ပုံဖော်ရုပ်လုံးတွေနဲ့တွေ့ရမယ်။ ပြတိုက်သွားရင် ကိုယ်မှတပါး အခြား ဧည့်သည်မရှိလောက်လို့ အေးဆေးလျောက်ပတ်ကြည့် အချိန်ဖြုန်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာပါ။